Wararka - Dib -u -eegis habaysan oo ku saabsan daahyada qalliinka iyo goonnada qalliinka
Dib -u -eegis Habaysan ee Dharka Qalliinka iyo Goonnada Qalliinka
Isticmaal shukumaan godka qalliinka madhalays ah inta lagu jiro qaliinka si aad uga hortagtid taabashada dusha miiska qalliinka oo aad ilaaliso madhalaysnimada dusha deegaanka, qalabka, iyo deegaanka bukaanka ku xeeran. Sidoo kale, inta lagu guda jiro qaliinka, waa in sidoo kale goonnada qalliinka oo madhalays ah lagu xidho kooxda dhakhaatiirta si loo ilaaliyo madhalaysnimada aagga qalliinka loona yareeyo halista cudur -sidaha ku faafa bukaannada iyo shaqaalaha.
Goonnada qalliinka iyo shukumaannada godka qalliinka waxaa laga sameeyaa waxyaabo badan ama hal mar la isticmaalo. Labada qaybood, naqshadeynta iyo sifooyinka waxqabad ee qayb kasta aad bay u kala duwan yihiin, taas oo ka tarjumaysa ka ganacsiga lagama maarmaanka u ah dhaqaalaha, raaxada, iyo heerka ilaalinta ee looga baahan yahay hawlgallada gaarka ah.
Inta lagu jiro qaliinka, haddii alaabtii daloolku qoyso, khatarta gudbinta cudur -sidaha ayaa sii kordheysa. Sidaa darteed, shukumaanada godka qalliinka ee ujeeddo badan leh ama ujeedo leh iyo qalabka goonnada qalliinka ee loo adeegsado hawlgallada qalliinka waa inay awoodaan inay ka hortagaan gelitaanka dareeraha. Qalabka dib loo isticmaali karo wuxuu inta badan ka kooban yahay dhar kala duwan oo cufan leh iyo/ama suuf la tolay, ama dhar kale oo lagu qasi karo daaweyn polyester iyo/ama kiimiko ah. Alaabooyinkani waa inay ahaadaan kuwo waara. Shukumaannada godka qalliinka ee la tuuri karo iyo goonnada qalliinka waxaa badanaa laga sameeyaa dhar aan la tollayn oo ka samaysan qalabka dardaaranka iyo/ama agab dabiici ah, waxaana laga yaabaa in si kiimiko ah loo daweeyay.
Ka dib marka la dhammeeyo diyaarinta goobta qalliinka, ku isticmaal shukumaan dalool qalliin oo aan ahayn tolmo, shukumaan dalool oo caadi ah ama shukumaan dalool oo lagu duray wakiilka bakteeriyada (inta badan iodophor) maqaarka bukaanka. Filimkan wuxuu ku dheggan yahay maqaarka, dhakhtarka qalliinkana wuxuu jaraya maqaarka ka dibna wuu daboolayaa. Aragti ahaan, waxaa loo tixgeliyaa carqalad farsamo iyo/ama microbial si looga hortago in microbes -ka ka hayaamaan maqaarka una gudbaan goobta qalliinka.
“Tilmaamaha SHEA/IDSA” ee la soo saaray 2014 waxay ku taliyeen in marooyin isku dhafan oo aan lahayn astaamaha bakteeriyada aan loo isticmaalin istaraatijiyad joogto ah oo looga hortago SSI 8. Isla mar ahaantaana, Ururka Caafimaadka Qaranka ee Ingiriiska Machadka Daryeelka Caafimaadka (NICE) wuxuu soo saaray tilmaamaha 2008, isagoo ku taliyay in haddii loo baahdo maro shukumaan god ah oo isku dhafan, in la isticmaalo maro iodophor la gashaday.